Published 9:42 PM, July 29, 2018
Updated 9:42 PM, July 29, 2018
CLAIM. Former Zimbabwe President Mugabe addresses the media in Harare on July 29, 2018 during a surprise press conference on the eve of the country's first election since he was ousted from office last year. Photo by Jekesai Njikazana/AFP
HARARE, Zimbabwe – Former Zimbabwe president Robert Mugabe, who was ousted by the military in November, made a surprise intervention Sunday, July 29, on the eve of key elections, calling for voters to throw his former party out of office.
In the country's first election since Mugabe was ousted after 37 years in power, Zimbabwe goes to the polls Monday, July 30, amid mounting allegations of voter fraud and predictions of a disputed result.
"What is left now is only one push on Monday to vote – to vote for ZANU-PF so we have a thunderous victory," Mnangagwa told his supporters who filled about half of the 60,000-capacity national stadium at his final rally on Saturday, July 28.
A presidential run-off vote is scheduled for September 8 if no candidate wins at least 50% in the first round. – Rappler.com
Filed under:Robert Mugabe•Zimbabwe elections•Zimbabwe